Sida loo Play MKV Faylal ay ku Nexus 7
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan MKV in Nexus 7 siman Radidiyaha
Waxaan dhibaato ka qabo marka i wareejin files MKV in aan Nexus 7. Mar kasta oo aan isku dayo waxa, aan computer ayaa sheegay in "sahamisa Windows ayaa joojiyay ka shaqeeya". Si kastaba ha ahaatee, ma ahan in aan wax dhibaato ah files kale (AVI, MP4, iwm), laakiin files MKV. Qof kasta oo ku caawin?
Haa, waa dhibaato guud. MKV waa weel ama file qaab adag oo ah in la qabto tiro aan xad lahayn of audio, video, image awood iyo xitaa subtitles in mid ka mid file hal. Nexus 7 ayaa waafaqsan miskiin ah ama qiimo leh qaab file MKV ah. Sidaas darted, haddii aad rabto in aad ka ciyaari file MKV ah ee Nexus 7, aad leedahay doonaa si loogu badalo MKV in ay Nexus 7 ee qaabab socon hor inta aan wax kala iibsiga file. The Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) si weyn lagu talinayaa in kiiskan. Software Tani waa mid aad u fudud oo degdeg badan ee diinta files MKV aad (oo ay ku jiraan HD 1080P MKV) si Nexus 7 qaab si buuxda u taageerto, ay si toos ah aad u bixinaya qaab filaayo in (in presets dhisay-in) aallada la doonayo.
Hawlgalka oo dhan ku qaadan doonaa oo kaliya ilaa 3 talaabooyin fudud! Just raacaan hage tallaabo-tallaabo hoos ku qoran. Ka hor inta aan in, fadlan kala soo bixi iyo rakibi Wondershare Video Converter.
Talaabada 1: files Import MKV in MKV in ay Nexus 7 video Converter u diinta
Talaabada 2: Dooro Nexus 7 sidii qaab wax soo saarka
Talaabada 3: Play MKV on Nexus 7
Kale MKV converters
Guji ka button (sida ka muuqata) si ay caleenta iyo geliyaan files MKV aad. Haddii kale, sidoo kale si toos ah aad u heshaan karo files MKV in aad rabto in aad ka directory maxalliga ah ka dibna jiidi-iyo-hoos u iyaga u gal interface ka. Ka dib markii in, aad arki doonaa kuwa files MKV uploaded soo bandhigay in thumbnails video.
Fiiro Gaar ah: Waxaa jira waddo file hoose ee interface ka. The files gediyay si toos ah kaydin doonaa folder caadiga ah. Haddii aad rabto in aad beddesho jid galka, kaliya riix "..." button iyo magaca aad ka doorteen jidka ama file magaca.
Just la helo (goobaha ugu fiican filaayo) dhisay-in horena u Nexus 7 oo ay doortaan sida qaab wax soo saarka. Si loo sameeyo, riix Device midig ka dib markii Qaabka Output . Markaas, ka-category sub ee Kuwo kale. Ugu dambayn, guji Nexus 7 .
Just bilaabi files MKV in Nexus 7 ee video qaab beddelidda garaacida ka badalo button rukun-midigta hoose oo ka mid ah barnaamijka 's interface ugu weyn. Software Tani ayaa dhameystiri doona diinta video ilaa 30 jeer ka dhakhsi badan Converter kale oo aad isticmaali hor iyo tayada sameecadda ah. Marka lagu sameeyey, waxaa jiri doona fariin pop-up aad keentay in hawlaha lagu dhameystiro.
Ka dib markii diinta, aad u heshaan karo ama dib u soo ceshano faylasha la gediyay sida Jidka file ah (sida ku xusan Talaabada 1) ama garaacida ay Folder Open button. Next, wareejin files kuwaas oo si aad Nexus 7 via cable USB ah. Waxa ay noqon doontaa wax badan ka sahlan marka aad u baahan tahay si ay u qabtaan diinta ka xiga.
Talaabada 4: converters kale MKV
Waxaad isku dayi kartaa mar kasta ka baxsan converters MKV kale sida Freemake Video Converter , MPEG Streamclip ama MediaCoder sida kale ah. Kale oo ka Freemake Video Converter, xal kale kale la jaanqaadaan u download iyo rakibidda labada Windows iyo Mac PC ka hawlgala. Oo weliba waxaa diinta, waxa kale oo aad isticmaali kartaa Freemake Video Converter si ay u abuuraan duubey ka ururinta sawir aad. Streamclip MPEG ayaa, dhinaca kale, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si loogu badalo files labada muxed ama demuxed iyo sidoo kale iyaga encode nooc kale file u loo maqli karo ee doorashada ka mid ah qalabka la qaadi karo. Si fudud hoos ku tixraac u shaashadda ka mid ah MPEG Streamclip ee interface.
Haddii aad raadineyso weeyna qaab horumarsan oo tayo leh, MediaCoder noqon doonaa bet ammaan ah sidii aad ku siinayaa goynta-ku laayeen awood transcoding. Waa arrin aan loogu tala galay bilowga ah ee sida set argument qabsan kara si fudud idin Maansheeyo kartaa haddii aad runtii samir in ay tagaan waa Tababruhu ama doonaya si ay u bartaan go'an cusub ee xirfada. Daacadnimadii, interface ka soo dhiciyo ka dhigaysa in ka yar jiidata marka la barbar dhigo converters kale.
Haddii aad rabtid in aad tijaabiso qaar ka mid ah Converter online, ka fiiri liiska of converters online heli karo. Waa rakibo-free sida oo dhan beddelaad lagu samayn doono online. Sidaa awgeed, internet aad leedahay si ay u noqdaan mid aad joogto ama aad si fiican u badalo faylasha aad ee saacadaha aan ugu sarreysa. Haddii kale, waxaad la taag doonaa galay PC for mararka qaar ilaa ay dhameystiray qaab beddelidda. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay diinta ka ah laablaab laheyn haddii aad kaliya haysato files yar ee gacanta u baahan in diinta.